एन्फाभित्रको षडयन्त्रले फुटबलको दुर्दशा ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एन्फाभित्रको षडयन्त्रले फुटबलको दुर्दशा !
प्रकाशित मिति ४ बैशाख २०७५, मंगलवार ०८:३० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । नेपाली फुृटबलमा यतिठूलो दशा भइरहेको छ कि सम्बन्धित निकाय तमासा हेरेर बसेको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ(एन्फा)केन्द्रको चुनाव हुनु एक हप्ता बाँकी छँदा जिल्लाबाट मुद्दा हालिन्छ अनि मुख्य चुनाव रोकिन्छ । त्यसपछि अदालतको आदेशपछि बल्ल जिल्लाको चुनाव गरिन्छ । जिल्लाको प्रक्रिया ढिला गरी गराइन्छ । त्यसपछि विशेष परिस्थितिको सदुपयोग नगरी पुरानै प्रक्रिया अपनाउन खोजिन्छ ।
अर्थात् सदरमुकामबाट एक घण्टाको दूरीमा समेत नरहेको भक्तपुरबाट सूचना आउँदैन एन्फा केन्द्रमा र निर्वाचनको मिति तोक्न अझै सकिँदैन । यो चालभित्र ठूलै षड्यन्त्र भएको खुलेको छ । त्यो षड्यन्त्र हो अखिल नेपाल फुटबल संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुूवरलाई साफमा पठाउनु । उनी साउथ एसियन फुटबल फेडेरेसनको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । अनेक तिकडमबाजी र षडयन्त्र गरेर यहाूको निर्वाचन पछाडि धकेलेर उनी साफको उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन् । त्यो पनि निर्विरोध । यसमा पूर्व अध्यक्ष एवं उनका भिनाजु गणेश थापाले ठूलो भूमिका खेलेको एन्फा स्रोत बताउछ । त्यतिमात्र होइन यहाूको अवस्थालाई अस्तव्यस्त पारेर अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ अष्टूेलिया हानिएका थिए ।
यतिठूलो चलखेल हुूदासमेत एन्फाको प्रतिपक्षी समूह चाहिं शान्त बस्यो । एन्फाको यो प्रतिपक्षी समूहले केही पनि गर्न, चूूसम्मको आवाज पनि निकाल्न सकेन । एन्फाको अध्यक्षका उम्मेदवार मणि कुूवर यहाू हारे पनि अब साफमा भइरहूदा भने नेपाली फुटबललाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नै छ ।
यदि एन्फाको चुनाव समयमा नै भएको भए कुूवर साफमा जान पाउने थिएनन् कि । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हक अध्यक्षको हुने थियो । अध्यक्षका उम्मेदवार कर्माछिरिङ शेर्पा बलियो रहेको अनुमान गरिदैछ । त्यसैले एन्फाको चुनाव गर्न ढिलाई गरेरै कुूवरलाई साफमा लगेको बताइन्छ । खेलाडीहरू प्रश्न गर्छन्, योभन्दा ठूलो बेइमानी अवस्था के हुन सक्छ ?
काठमाडौं । मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भएका बलात्कारका घटना भयावह छन् । जसका विरोध र अनुसन्धानका पाटामा सुरक्षा संयन्त्रसहित सरकारलाई…
विद्यालयमा भेटियो शंकास्पद वस्तु, बमको आशंका
अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कस्थित अर्घाखाँँची आवसीय माविमा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ ।
सनिधखर्क–२ चुत्राबेसीको बेलबाटीकामा रहेको अर्घाखाँची आवसीय माविको तारबारको…
वृद्ध अवस्थामा सुंगुरपालन
वीरगञ्ज । कुनै पनि काम सानो वा ठूलो हुँदैन । समयले पेट पाल्नका लागि जसलाई पनि काम गर्नुपर्ने बाध्य…
एमाले–माओवादी एकता संयोजन समितिको बैठक स्थगित
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादीको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक फेरि स्थगित भएको छ ।
जनकपुरबाट गुड्यो रेल
जनकपुर । जनकपुरदेखि भारतको जयपुर जोड्ने रेलवे सेवाको परीक्षण सफल भएको छ । नेपाल र भारतका उच्च अधिकारी तथा प्राविधिकले…